Fanadiovana ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka Polisy iray nanao kolikoly nidoboka any am-ponja
Tsy misy alaharo ny fitondrana mijoro, indrindra ny eo anivo’ny mpitandro filaminana, tahaka ny polisim-pirenena fa any am-ponja avokoa no miandry fitsarana izay nandika lalàna. Ankoatra
ireo polisy voarohirohy tamin’ny herisetra tahaka ny raharaha Ampitatafika sy fakantsarin’ny mpanao gazety teny Mahamasina, polisy iray koa no naiditra am-ponja vonjimaika niaraka tamin’ny mpamily taksibe sy ny mpanampy azy. Taorian’ny fampanoavana ny zoma teo, samy nalefa eny amin’ny toeram-panarenana eny Antanimora avokoa izy ireo mandra-pitsara azy. Voarohirohy tamin’ny resaka kolikoly izy ireo. Ny alahady 15 jona no nitranga ny tantara teo Ankadindratombo, raha nanao fahadisoana ilay mpamily. Nangataka fifandaminana tamin’ilay polisy ireo mpanamory sy ny
mpanampy ka nanolotra vola tamin’ilay mpitandro filaminana. Araka ny vaovaon’ny polisim-pirenena hatrany, tsikaritry ny polisy avy ao amin’ny Inspection générale de police nationale izany na
IGPN izay nijoro tsy lavitra teo. Nanaovana fanadihadiana avy hatrany ity fihetsika kolikoly izay tratra ambodiomby ity ka izao natolotra ny fitsarana ny zoma teo izao. Tsy misy kitranoantrano velively ao
amin’ny polisim-pirenena, arak’izany.
Misy polisy manara-maso ireo mpitandro filaminana mpandrindra ny fifamoivoizana mba hiadiana amin’ny kolikoly.